Items 1 to 16 of 1513 total
<p>ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား Decoration &amp; Construction Services လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္</p><p>- ပစၥည္းတူရင္ ေစ်းသပ္သာရမယ္။</p><p>- ေစ်းတူရင္ ဝန္ေဆာင္မွဳေကာင္းရမယ္။&nbsp;</p><p>- ယံုျကည့္စြာနဲ့ ဝယ္ယူငွားရမ္းအသံုးျပဳနိဳင္ပါသည္။</p><p>- ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး ျငမ္းပိုက္မ်ား Scaffolding Sleeve Coupler နွင့္ ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ိဳးစံုကို ဝယ္ယူ ငွါးရမ္းအသံုးျပဳနိဳင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ.....</p><p>ကြၽန္​​ေတာ္​တို႔ Empire မွ လူႀကီးမင္းတို႔၏ လုပ္ငန္းခြင္သံုး Scaffolding Sales &amp; Rental Services, Formwork Accessories &amp; Steel Structure နွင့္ ျငမ္းဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ိဳးစံုကို ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ အရည္အေသြးမွန္ပစၥည္းမ်ားကို ျဖန္႔ခ်ီေပးေနပါသည္။</p>
Master King Safety Shoes
18000 ~ 21000 Kyats
<p>Quality&nbsp;ေကာင္းၿပီး&nbsp;ေစ်းနွုန္းသက္သာတဲ႔ Safety Shoes&nbsp;ေတြကို႔ Safety Pro International Co.,ltd တြင္ဝယ္ယူလိုု႔ရေနပါၿပီ။&nbsp;ေပါ့ေပါ့စီးခ်င္သူေတြ အတြက္ အထူးသင္႔ေလ်ာ္ပါတယ္ေနာ္။ ISO ရရွိထားတဲ႔ ပစၥည္းေကာင္းတစ္မ်ိဳးလဲျဖစ္ပါတယ္။&nbsp; master king safety shoes&nbsp;ေလးဟာဆိုရင္</p><p>&nbsp;Steel Midsole,Steel Midsole</p><p>- Steel Toe Cap</p><p>- Anti Static</p><p>- Oil Resistant&nbsp;</p><p>- Anti Slip</p><p>- Shock Absorption</p><p>- Leather Upper</p><p>- Chemical Resistant</p><p>- Upper Leather Water Repellent</p><p>- CE EN ISO 20345 စတဲ႔ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ အညီထုတ္လုပ္ထားတာ မို႔ အသံုးျပဳသူေတြ အတြက္ အရမး္ကို သေဘာၾကႀကိဳက္နွစ္သက္ေစမွာပါ။</p>
28000 ~ 31000 Kyats
<p>uality&nbsp;ေကာင္းၿပီး&nbsp;ေစ်းနွုန္းသက္သာတဲ႔ Safety Shoes&nbsp;ေတြကို႔ Safety Pro International Co.,ltd တြင္ဝယ္ယူလိုု႔ရေနပါၿပီ။&nbsp;ေပါ့ေပါ့စီးခ်င္သူေတြ အတြက္ အထူးသင္႔ေလ်ာ္ပါတယ္ေနာ္။ ISO ရရွိထားတဲ႔ ပစၥည္းေကာင္းတစ္မ်ိဳးလဲျဖစ္ပါတယ္။&nbsp; master king safety shoes&nbsp;ေလးဟာဆိုရင္</p><p>&nbsp;Steel Midsole,Steel Midsole</p><p>- Steel Toe Cap</p><p>- Anti Static</p><p>- Oil Resistant&nbsp;</p><p>- Anti Slip</p><p>- Shock Absorption</p><p>- Leather Upper</p><p>- Chemical Resistant</p><p>- Upper Leather Water Repellent</p><p>- CE EN ISO 20345 စတဲ႔ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ အညီထုတ္လုပ္ထားတာ မို႔ အသံုးျပဳသူေတြ အတြက္ အရမး္ကို သေဘာၾကႀကိဳက္နွစ္သက္ေစမွာပါ။</p>
Auto Gate By Thailand
<p>- သင့်ရဲ့နေအိမ်မှာ ခြံတံခါးကို နေ့စဉ်နဲ့အမျှဖွင်ခြင်းပိတ်ခြင်း၊ အိမ်သူအိမ်သားများ၏ အဝင်အထွက်များပြားသဖြင့် ခြံတံခါးကို အမြဲတစေဖွင့်ပြီး ခြံရှေ့တွင် အစောင့်တစ်ယောက်ထားနေရခြင်း၊ သင့်ရဲ့ကားအတွင်းမှနေ၍ ခြံတံခါးဆီသို့ မိုးရွာရွာ နေပူပူ တံခါးဖွင့်ရန် မလိုအပ်တော့သလို အိမ်သားတစ်ယောက်က အပြေးအလွှား ခြံရှေ့သို့ လာရောက်ဖွင့်ဖို့လဲ ဒီခေတ်မှာမလိုတော့ပါဘူး။</p><p><br></p><p>- အီတလီ၊မလေးရှားနိုင်းငံနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံထုတ် အီတလီ နည်းပညာသုံး အဆင့်မြင့်ခြံတံခါးအဖွင့်အပိတ် (Motor System) ကိုအသုံးပြုကြည့်လိုက်ပါ....100% စိတ်ချမ်းသာရမည်ဖြစ်ကြောင်း အာမခံပါသည်။</p><p>နည်ပညာမြင့် ပစ&nbsp; &nbsp;များဖြစ်သည်နှင့်အညီ ၂၀၁၈ နည်းပညာအသစ်ဖြစ်သော (Mobile Opening System) မိမိ၏ မိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့် ခြံတံခါးအားဖွင့်ခြင်း၊ ပိတ်ခြင်း ပြုလုပ်နိုင်နေပြီကြောင်း သင်သိပြီးပြီးလား.....? ကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းပညာအသစ်ကို ယခုပဲ စမ်းသပ်သုံးစွဲဖို့ အကြံပေး လိုက်ပါရစေ.......</p><p><br></p><p>- မိုးတွင်းမှာ မိုးဘယ်လောက်ပဲ ရွာနေပါစေ မိုးစိုခံပြီး တံခါးဖွင့်ရန်... (မကြိုးစားပါနဲ့တော့) နွေအခါမှာ ပြင်းထန်သည့် နေအပူရှိန်အောက်မှာ ခေါင်းကိုက်ခံပြီး တံခါးဖွင့်ဖို့.......(မလိုတော့ပါဘူး)</p><p>Qduality ကို အထူးဦးစားပေး၍ အကောင်းဆုံးများကို Bo Bagan မှသယ်ဆောင်လာပါပြီ... အားမခံ တစ်နှစ် ပေးထားသဖြင့် စိတ်ချလက်ချ သုံးစွဲနိုင်ပြီး ကျွမ်းကျင် ဝန်ထမ်းများမှ သပ်ရပ်မြန်ဆန်စွာ တပ်ဆင်ဆောင်ရွက် ပေးနေပြီ ဖြစ်ပါသည်။ အားမခံတစ်နှစ်အချိန်အတွင်း (၃) ကြိမ် အခမဲ့ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များမှ လာရောက်စစ်ဆေးပေးမည်ဖြစ်ပြီး လိုအပ်ပါက Gear Oil လဲလှယ်ပေးခြင်း၊ တံခါးအဖွင့်အပိတ်စနစ်ကို စစ်ဆေးပေးခြင်း စသည့်လိုအပ်သည်များကို အခမဲ့ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်သဖြင့် မည်သူနှင့် မျှမတူသော (After Sales Service) ဝန်ဆောင်မှုကိုပါ ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်........</p><p><br></p><p>- အားမခံ တစ်နှစ် ကျော်သွားသည့်ဝယ်ယူအားပေးသူများကိုလည်း Service Contract Plan များဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါသဖြင့် တပ်ဆင်ထားပြီးသော အိမ်ပိုင်ရှင်များ စိတ်အေးချမ်းသာစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ မည်သည့်အရာမှ သင့်ကို စိတ်အနှောင့်အယှက် မပေးနိုင်တော့ပါဘူး......</p><p><br></p><p>- မိမိခြံတံခါး၏ အလေးချိန်ပေါမူတည်၍ (600 KG (Nylon Pinion Gear), 1,000KG (Metal Pinion Gear), 1800KG (Heavy Load), 2,200KG (For Industrial Type ) များစသဖြင့် တံခါးအလေးချိန်အလိုက် မော်တာများရရှိနိုင်ခြင်းကလည်း သုံးစွဲသူငွေကုန်ကျမှု သက်သာသမျှသတ်သာစေပါသည်။</p>
Auto Gate By Italy
Auto Gate By Malaysia
<p>- သင့်ရဲ့နေအိမ်မှာ ခြံတံခါးကို နေ့စဉ်နဲ့အမျှဖွင်ခြင်းပိတ်ခြင်း၊ အိမ်သူအိမ်သားများ၏ အဝင်အထွက်များပြားသဖြင့် ခြံတံခါးကို အမြဲတစေဖွင့်ပြီး ခြံရှေ့တွင် အစောင့်တစ်ယောက်ထားနေရခြင်း၊ သင့်ရဲ့ကားအတွင်းမှနေ၍ ခြံတံခါးဆီသို့ မိုးရွာရွာ နေပူပူ တံခါးဖွင့်ရန် မလိုအပ်တော့သလို အိမ်သားတစ်ယောက်က အပြေးအလွှား ခြံရှေ့သို့ လာရောက်ဖွင့်ဖို့လဲ ဒီခေတ်မှာမလိုတော့ပါဘူး။</p><p><br></p><p>- အီတလီ၊မလေးရှားနိုင်းငံနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံထုတ် အီတလီ နည်းပညာသုံး အဆင့်မြင့်ခြံတံခါးအဖွင့်အပိတ် (Motor System) ကိုအသုံးပြုကြည့်လိုက်ပါ....100% စိတ်ချမ်းသာရမည်ဖြစ်ကြောင်း အာမခံပါသည်။</p><p>နည်ပညာမြင့် ပစ&nbsp; &nbsp;များဖြစ်သည်နှင့်အညီ ၂၀၁၈ နည်းပညာအသစ်ဖြစ်သော (Mobile Opening System) မိမိ၏ မိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့် ခြံတံခါးအားဖွင့်ခြင်း၊ ပိတ်ခြင်း ပြုလုပ်နိုင်နေပြီကြောင်း သင်သိပြီးပြီးလား.....? ကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းပညာအသစ်ကို ယခုပဲ စမ်းသပ်သုံးစွဲဖို့ အကြံပေး လိုက်ပါရစေ.......</p><p><br></p><p>- မိုးတွင်းမှာ မိုးဘယ်လောက်ပဲ ရွာနေပါစေ မိုးစိုခံပြီး တံခါးဖွင့်ရန်... (မကြိုးစားပါနဲ့တော့) နွေအခါမှာ ပြင်းထန်သည့် နေအပူရှိန်အောက်မှာ ခေါင်းကိုက်ခံပြီး တံခါးဖွင့်ဖို့.......(မလိုတော့ပါဘူး)</p><p>Qduality ကို အထူးဦးစားပေး၍ အကောင်းဆုံးများကို Bo Bagan မှသယ်ဆောင်လာပါပြီ... အားမခံ တစ်နှစ် ပေးထားသဖြင့် စိတ်ချလက်ချ သုံးစွဲနိုင်ပြီး ကျွမ်းကျင် ဝန်ထမ်းများမှ သပ်ရပ်မြန်ဆန်စွာ တပ်ဆင်ဆောင်ရွက် ပေးနေပြီ ဖြစ်ပါသည်။ အားမခံတစ်နှစ်အချိန်အတွင်း (၃) ကြိမ် အခမဲ့ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များမှ လာရောက်စစ်ဆေးပေးမည်ဖြစ်ပြီး လိုအပ်ပါက Gear Oil လဲလှယ်ပေးခြင်း၊ တံခါးအဖွင့်အပိတ်စနစ်ကို စစ်ဆေးပေးခြင်း စသည့်လိုအပ်သည်များကို အခမဲ့ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်သဖြင့် မည်သူနှင့် မျှမတူသော (After Sales Service) ဝန်ဆောင်မှုကိုပါ ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်........</p><p><br></p><p>- အားမခံ တစ်နှစ် ကျော်သွားသည့်ဝယ်ယူအားပေးသူများကိုလည်း Service Contract Plan များဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါသဖြင့် တပ်ဆင်ထားပြီးသော အိမ်ပိုင်ရှင်များ စိတ်အေးချမ်းသာစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ မည်သည့်အရာမှ သင့်ကို စိတ်အနှောင့်အယှက် မပေးနိုင်တော့ပါဘူး......</p><p><br></p><p>- မိမိခြံတံခါး၏ အလေးချိန်ပေါမူတည်၍ (600 KG (Nylon Pinion Gear), 1,000KG (Metal Pinion Gear), 1800KG (Heavy Load), 2,200KG (For Industrial Type ) များစသဖြင့် တံခါးအလေးချိန်အလိုက် မော်တာများရရှိနိုင်ခြင်းကလည်း သုံးစွဲသူငွေကုန်ကျမှု သက်သာသမျှသတ်သာစေပါသည်။</p><p><br></p>
Sliding Autogate Operation
<p>Autogate သုံးဖုိ႔ဆုိရင္ေတာ့ လက္မေလး တစ္ေခ်ာင္းပဲလုိတယ္ေနာ္..</p><p><br></p><p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; line-height: 15.3333px; font-family: Zawgyi-One, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41);"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Roboto, Arial, &quot;Droid Sans&quot;, sans-serif; font-size: 13px;">Safety Pro International Company Limited</span>&nbsp;<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">မွ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ISO လက္မွတ္ရရွိၿပီးသား Safety Product မ်ားကို Show room မ်ားဖြင့္လွစ္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံတ၀ွမ္းလံုးသို႔ ျဖန္႔ခ်ိေပးလွ်က္ရွိပါတယ္။</span><br><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">လူၾကီးမင္းတို႔ရဲ႕ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မ်ားႏွင့္ စက္ရံု၊ အလုပ္ရံုမ်ား၊ တယ္လီကြန္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္သေလာက္ ရရွိ၀ယ္ယူႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါတယ္ခင္ဗ်။</span></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="EN-SG">Safety Pro International Company Limited is established by safety expertise and safety profession.&nbsp; Safety Pro provides sales and distribution of Personal Protective Equipment (PPE) and Safety Equipment.&nbsp; We provideacomprehensive range of products such as head protection, eye protection, hearing protection, protective clothing, hand protection, foot protection, fall protection, traffic equipment, mini fire extinguishers, etc.&nbsp; Our products include PPEs which meet with European Standards, CE Marking. Safety Pro is the authorized distributor of Proguard for Myanmar.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; line-height: 15.3333px; font-family: Zawgyi-One, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41);"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="EN-SG">Occupational health and safety are critical for every business and industry.&nbsp; As the heart of our business, we sales and distributes proper safety products to various industries.&nbsp; We distribute PPE as well as safety knowledge.&nbsp;&nbsp;</span><o:p></o:p></p><div><span lang="EN-SG"><br></span></div>